FANAFIHANA TENY AMBOHIMANARINA : Jiolahy iray nadoboka am-ponja eny Tsiafahy
Lehilahy iray no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny sampan-draharahan’ ny Polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika faha 05 ny sabotsy 08 jona 2019 teo rehefa avy nanao fanafihana mitam-piadiana teny Ambohimanarina, ny alin’ny zoma 07 jona 2019 lasa teo. 13 juin 2019
Tamin’ny 08 ora alina dia nahazo antso avy amin’ny Polisy avy ao amin’ny CSP6 Ambohimanarina ny Sampan-draharahan’ ny Polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika faha 05 milaza fa misy trangana fanafihana mitam-piadiana miseho eny amin’ny faritra Antanety Avaratra. Nidina teny an-toerana avy hatrany ireo Polisy saingy efa lasa nandositra ireo olon-dratsy.
Natomboka avy hatrany ny fanadihadiana ka tamin’izany no nambaran’ny tompon-trano fa jiolahy miisa efatra tsy nisaron-tava no nanafika azy ireo. Basy kalachnikov sy basy poleta ary sabatra no nentin’izy ireo nanatanteraka ny asa ratsiny. Lasan’izy ireo tamin’izany moa ny Finday miisa enina, “Radio-carte” iray ary vola mitentina fito tapitrisa ariary. Nilaza ihany koa ny niharam-boina fa mahatadidy tsara ireo mpanafika azy. Ny 08 jona 2019 tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro dia hitan’ireo voatafika nivezivezy teo Anosy ny iray tamin’ireo nanafika azy. Niantso ny Polisy avy hatrany izy ireo ka dia nosamborina io lehilahy io.
Nandritra ny fisavana azy dia nahitana antsy iray tao anaty sakaosiny, ary mbola teny aminy ihany koa ireo fitafiana izay nanaovany nandritra ny fanafihana. Nampidirina eny amin’ny fonjan’i Tsiafahy izy taorian’ny nanolorana azy teo anoloan’ny fampanoavana. Mbola karohina kosa ireo namany ankehitriny.